Indima yabantwana bakaThixo -abazali bakaThixo baba ngumntwana
Kukho amasiko ahlukeneyo oothixo
Kuya kubakho ukukhokela incoko ecacileyo kunye no-godfather oyifunayo
Xa umntwana sele ebhaptizwe, kubalulekile ukufumana u-godfather. Oku kuya kuba ngumntu osondelene nabazali. Kodwa ziphi na izinto ezilindelekileyo okanye zibophelelo, yiyiphi indima kunye nemisebenzi edibaniswa noothixo?
Siza kuba ngabazali bakaThixo!
Siba ngabazali bakaThixo!
U-godfather wahamba nomntwana ekubhaptizweni kwiinjongo zonqulo, ethatha uxanduva lokuba umntwana ufunde ukholo ngokwabo aze afunde ukuhlala.
Kuze kube ngumnyaka we-1983, ukuxhaswa kwicawa kwakumele ubuhlobo bokomoya. Igama elithi godfather livela kwisiLatini kwaye lithetha into efana "noyise".
KwiCawa yamaKatolika kunye neProtestanti, iimeko zokuxhaswa ziyahluke.
Oku kungayilungelelwano lokubambisana, ukuyila kwekhandlela lokubhaptizwa, iBhayibhile yezingane njengesipho okanye isifiso somntu okanye isithembiso sokuphila, esibhalwe ngokubhaliweyo. Kweminye imimandla yinto yesiko ukuba abantwana bazise u-godfather wakhe umthi wesundu kwiSonto lePalesi ehlotshiswe kakuhle kwaye uyasikelela ebandleni. Usuku lokubhaptizwa lunokuba sisizathu sendibano minyaka yonke ukukhumbula ubhaptizo kunye nesithembiso.
Nangona kunjalo, namhlanje, ukunyaniseka kwezenkolo zonqulo-ntombi kuye kwasuka kwinqanaba
Umxhasi unqwenela ukuhamba nophuhliso lomntu kunye nokuncedisa umzali kwimicimbi yemfundo. Ngamanye amaxesha uxhaswa luxhomekeke ekunikeni izipho kwizihlandlo ezimnandi.
Abazali bakaThixo kufuneka bazame ukwakha ubudlelwane bomntu kunye noThixo kunye nokuba ngumcebisi wabo okanye umlamli phakathi kwabazali. Kwixesha elidlulileyo, oothixo babenomsebenzi wokunyamekela xa abazali babo befa. Nangona kunjalo, uxhaswa aluxhaswanga nogcini. Ukuba abazali banqwenela, oku kuya kunqunywa ngentando.
Ziziphi izilindelo, iimfuno kunye neembopheleleko koothixo? Oku kusindisayo kumacala omabini. Kwimeko efanelekileyo, ulwalamano lokuthembela lukhula phakathi komntwana kunye Pateezinokuhlala iminyaka. Ngokuqinisekileyo, abazali abanakuba ngabantwana boothixo, kodwa ootatomkhulu. Kananjalo nabantwana bakowenu okanye abahlobo abahle kakhulu bakhethwe ngokunyanisekileyo. Kubalulekile ukuba unokwakha omnye komnye ngokwemigangatho yemigangatho nemfundo.
Lahla iingxaki zangemva
Yiba ne-Influencer-eBook ye-Free